China European Mugwagwa Wekutakura-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Our Services>International Road Transport>China European Mugwagwa Wekutakura
Sohologistics inotakura zvinhu zvako muChina wobva waendesa kune vese mukondinendi yeEurope neChina - Europe yepasi rose mugwagwa mukuru wekufambisa, uyo unongotora mazuva gumi nemaviri.
Zvakanakira uye musika zvinoda kuChina-Europe International Road Transport
1. Kuderedza mazuva gumi kana mashoma nguva yekufambisa pane njanji yekufambisa
2. Kuchengetedza mari inosvika makumi mashanu kubva muzana pamusuo nesuo wekufambisa mhepo
Ndeapi mhando yezvinhu akakodzera kune dzimwe nyika nzira yekufambisa kuenda kuEurope?
Zvigadzirwa zvemagetsi, Mabatch eE-commerce zvinhu, zvigadzirwa nemabhatiri, Zvipenga zvikamu uye nezvimwewo.
Maitiro ekuitisa tsika kuzivisa, kutsikisa tsika uye kubvumidzwa kwetsika kweChina-Europe yekufambisa nzira dzenyika?
Ndeipi incoterm inoshandiswa kuChina-Europe kune dzimwe nyika nzira dzekufambisa?